FAQ - SINHAI टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
तपाईं एक ट्रेडिंग कम्पनी वा एक निर्माता हुनुहुन्छ?
कारखाना! हामी २०० 2001 मा Manufacture०,००० टन्सको वार्षिक क्षमताको साथ निर्माता बनेका छौं।
म कसरी पोलीकार्बोनेट सफा गर्छु?
हो, हामी सबै अन्तर्राष्ट्रिय आदेशहरू आवश्यक छ चल न्यूनतम अर्डर मात्रा। यदि तपाईं पुन: बेच्न खोज्दै हुनुहुन्छ तर धेरै थोरै परिमाणमा भने,
Any कुनै पनि SINHAI पोलीकार्बोनेट उत्पादनहरूमा घर्षण वा उच्च क्षारीय क्लीनर प्रयोग नगर्नुहोस्।
Clean क्लीनर SINHAI पोलिकार्बोनेटमा नछोड्नुहोस् समय अवधिको लागि। चिसो, सफा पानीको साथ तुरुन्त कुल्नुहोस्।
Direct प्रत्यक्ष सूर्यको प्रकाशमा क्लीनरहरू लागू नगर्नुहोस्।
Pol पॉलीकार्बोनेटमा तीक्ष्ण वस्तु, निचोड वा रेजर कहिल्यै प्रयोग नगर्नुहोस्।
Gas पेट्रोलले सफा नगर्नुहोस्।
● सँधै सुरक्षाको अभ्यास गर्नुहोस् र पोलिक कार्बोनेट प्यानलमा कहिले सीधा कदम चाल्नुहुन्न।
● सँधै साना टेन्सर क्लीनरहरू सानो असंगत क्षेत्रमा पूरै प्यानल सफा गर्नु अघि विपरित नतिजाको बिरूद्ध सुनिश्चित गर्न।
The प्यानलको नजिक आउन प्रेसर वाशर स्प्रे सल्लाहलाई अनुमति नदिनुहोस्। प्यानर छिराउन वा फाड्नको लागि स्प्रे टिपमा अक्सर प्रेसर वाशरहरूमा पर्याप्त दबाव हुन्छ।
Sand प्यानलको बाहिरी भागमा चिप्लने बालुवा र धुलो कणको रूपमा सुख्खा सफा गर्ने बेवास्ता गर्नुहोस् सतह स्क्र्याच गर्न सक्दछ।
हामी तपाईंलाई हाम्रो वेबसाइट जाँच गर्न सुझाव दिन्छौं
के Polycarbonate लाईट ट्रान्समिन्सन्स समय भन्दा फरक पर्नेछ?
SINHAI को पोलीकार्बोनेट उत्पादनहरू एक UV संरक्षण तहको साथ ढालिएको छ जुन फोटोडेग्रेडेशन, पहेलो, र भंगुरता बिरूद्ध गार्ड गर्दछ। यसले शिटहरूलाई यूभी विकिरणको हानिकारक प्रभावबाट बचाउँछ र प्रकाश बर्षको प्रसारण र गुणस्तर धेरै वर्षसम्म कायम राख्न मद्दत गर्दछ। हाम्रो उत्पादनहरू १० बर्षको ग्यारेन्टीको साथ प्रकाश ट्रान्समिटन्सको हानिको बिरूद्ध आउँदछन्। विशेष अनुरोध पछि, हामी एक लामो वारेन्टी संग एक लागू यूवी संरक्षण तह प्रदान गर्न सक्दछौं।
हामी तपाईंको लागि उपयुक्त पानाहरू कसरी छनौट गर्छौं?
पानाहरूको बारेमा अधिक जानकारीको लागि हामीलाई तपाईंको आवेदन भन्नुहोस्।
Polycarbonate को न्यूनतम अनुमति दिईएको झुकाव रेडियस के हो?
पोलीकार्बोनेटको न्यूनतम स्वीकृत झुकाव रेडियस २०० टाइट्स शीटको मोटाई हो, उदाहरणका लागि २ मिलिमिटर शीटको न्यूनतम 400०० मिटर झुकाव रेडियस हुन्छ।
म कसरी पोलर कार्बोनेटको रंग, लाइट ट्रान्समिशन (लेफ्टिनेंट) र धुंध गुणहरू निर्धारण गर्ने?
यो निर्णय अनुप्रयोगमा निर्भर गर्दछ - केहि रंगहरू पारदर्शी छन् र केहि पारदर्शी छन्। यदि दृश्य-माध्यम सामग्री आवश्यक छ भने, त्यसपछि धुन्ध १% भन्दा सानो हुनुपर्दछ र Lt% रोशनी डिजाइनमा आधारित हुनुपर्दछ। यदि एक पारदर्शी प्रभाव आवश्यक छ भने, त्यसपछि धुंध १००% हुनुपर्दछ र Lt% छनौट रंगको आधारमा।
म कसरी फेलीएड कर्भलाई पालना पोली कार्बोनेट बन्छु?
सबै SINHAI पोलीकार्बोनेट उत्पादनहरू स्थापनाको क्रममा कोल्ड बेन्ट अनसाइट हुन सक्छ, एक न्यूनतम त्रिज्याको अधीनमा। न्यूनतम त्रिज्याको लागि नियम-अफ-थम्ब हो मोटाई १ By5 ले गुणा गर्दछ।
SINHAI को पॉली कार्बोनेट प्यानेलहरू काट्न म के प्रयोग गर्छु?
प्लाईवुड ब्लेड वा जिग सो दाँत दाँत ब्लेडको साथ गोलाकार आरा प्रयोग गर्नुहोस्। यो सफा, पनि काट्छ। फिल्म लिनु अघि शीट काट्नुहोस्, वा स्थिर चार्जले च्यानलहरूमा राम्रो चिपहरू आकर्षित गर्दछ। स्थापना भन्दा पहिले कुनै राम्रो सेभिंगहरू वा चिप्स हटाउनुहोस्। लेन्डरहरू मार्फत ढु .्गाले च्यानलहरू सफा गर्न जारी राख्दछ, तर सकेसम्म सफा हुनुहोस्। स्थापना गर्न तयार नभएसम्म शिटमा फिल्म छोड्नुहोस्, धुलोबाट मुक्त ठाउँमा हटाउनुहोस्। पातलो पानाहरू एक चाँडै एक उपयोगि चाकूको साथ काट्न सकिन्छ क्ल्याम्प प्रयोग गरेर र सीधा किनारा सुरक्षित गर्न, सटीक, सीधा कटौती सुनिश्चित गर्न।
म कसरी एक नाकालय पोलिक कार्बोनेट पानाहरू स्काइलाइटको रूपमा स्थापना गर्ने?
नालीदार पोलीकार्बोनेट पानाहरू धातु छतको एक समान भागको रूपमा स्थापित छन्। अधिक जानकारीको लागि, कृपया सिनहाईको स्थापना निर्देशनहरू समीक्षा गर्नुहोस् समीक्षा गर्नुहोस्।
कसरी हाम्रो वितरक हुन सक्छ?
हामी भवन र सजावट सामग्रीका आयातकर्ताहरूसँग सहयोग गर्न इच्छुक छौं। एजेन्टहरू विश्वव्यापी जो राम्रो विश्वसनीयता र व्यापक बिक्री नेटवर्क स्वागत छ।